शान्तिका लागि अरबौँको खर्च – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
शान्तिका लागि अरबौँको खर्च
२०७१ चैत्र २४, मंगलवार ००:३६ गते
शान्ति पैसाले किन्न सकिने वस्तु होइन । यहाँ चर्चा गर्न लागिएको शान्ति युद्धपछि देशमा गर्न थालिएको निर्माणका विषयमा हो । नेपालमा १० वर्ष चलेको माओवादीको सशस्त्र संघर्षमा धेरै खालका संरचनाहरु भत्किए । त्यसको निर्माणमा खरब होइन, खरबौँ लाग्ने छ । युद्धले राजनीतिक अग्रगमनलाई कति सघायो वा सघाएन, त्यो छलफलको अर्को पाटो हो । तर, युद्ध पुरानो सत्ता भत्काउन केन्द्रित थियो । पुरानो सत्ता भनेर त्यो बेला सरकारी भवनहरु ध्वंस पारिए, जसको निर्माणमा अहिले पैसा खर्च भइरहेको छ । त्यस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्दा नेपाल सरकार मातहत निकायको शान्ति कोषले मात्रै १९ अरब रूपैयाँ खर्च गरेछ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पनि छ यो देशमा, जसले सशस्त्र संघर्षमा ज्यान गुमाएका परिवारका लागि राहत र घाइतेहरुका लागि कल्याणका काम पनि गर्छ । सानो तहका पुनर्निर्माणका योजना पनि मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको छ । तर, मन्त्रालय सुरू हुनुभन्दा अघि नै सन् २००७ मा शान्ति कोष स्थापना भएको थियो । त्यो कोषले अहिलेसम्म १९ अरब रूपैयाँ खर्च गरेर पनि पाँच अरब रूपैयाँ अझै जोगाएको छ । कोषले आउँदो तीन वर्षसम्म काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन बेला यो रकम खर्च हुने छ ।
कोषले १९ अरब रूपैयाँ केमा खर्च ग¥यो त ? कोषका निर्देशक मुकुन्दप्रसाद पौडेलका अनुसार सबैभन्दा धेरै खर्च भएको दुईवटा क्षेत्र छन् । त्यो हो, दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादीको अस्थायी शिविर र लडाकु व्यवस्थापन । निर्देशक पौडेलका अनुसार अस्थायी शिविर र लडाकु व्यवस्थापनका लागिमात्रै कोषले झन्डै छ अरब अर्थात् पाँच अरब ९३ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । माओवादीले विसं २०५२ सालको फागुन १ गतेदेखि देशमा सशस्त्र संघर्ष सुरू गरेको हो । विसं २०६३ सालको मंसिर पाँच गतेदेखि लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बस्न थालेका हुन् । सातवटा अस्थायी शिविरमा १९ हजार लडाकुहरु बसेका थिए । त्यसपछि कोहीले स्वैच्छिक अवकाश लिए । केही उमेर र उचाइजस्ता विवरणहरु असफल भएपछि फर्के ।
स्वैच्छिक अवकाश लिएकाहरु अहिले के गर्दै होलान् ? अयोग्य भनिएर शिविर छाडेकाहरु कहाँ होलान् ? अहिले कसैलाई मेसो
छैन । युद्ध लडेको पार्टी आज ठूला तीन चिरामा विभाजित भएको छ । सबै समूह आन्दोलनमा छन् । देशको अवस्थामा उहिले र अहिले ता¤िवक फरक छैन । राजाको शासनमा जस्तो कफ्र्यु, खानतलासी छैन, तर अन्य पक्षबाट सन्तोष लिन सकिने केही उदाहरणहरु छैनन् । दिनमा दुई हजारका हाराहारीमा युवाहरु विदेश जाने गरेका छन् । देशमा रोजगारी नहुँदा उनीहरु खाडीजस्तो प्रतिकूल मौसम भएको देशमा गएर कम पैसामा मिहेनत गर्न बाध्य भएका छन् ।
देश र जनताका लागि भनेर ज्यान हत्केलामा राखेर हिँडेका छापामारहरु पनि यही लाममा छन् रे । अनौपचारिक रुपमा आएको जानकारीअनुसार विदेशमा रोजगारीका लागि जाने पूर्वछापामारहरुको संख्या पाँच हजार जति छ रे । उ बेला युद्ध लडेको पार्टी अहिले पनि आन्दोलनमा नै व्यस्त छ । अरु एकाध माओवादी पार्टीहरु फेरि पनि युद्ध लड्ने चेतावनी दिन छाडेका छैनन् । तर, त्यो बेला युद्ध लडेर देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेकाहरुको हालत अहिले के छ ? न उनीहरुको पार्टीलाई वास्ता छ, न राज्यलाई नै यसमा चासो छ । अझ, अयोग्य भनेर निकालिएका–हरुको मनोभावना के–कस्तो होला ? उनीहरुका सम्बन्धमा न पार्टी बोल्यो, न सरकारले सोच्यो । अहिले त्यस्ता छापामारहरुले केही गर्छन् कि भनेर पार्टीकै नेताहरु त्रसित हुने गरेका छन् रे बरू । तर, नेताजीहरु फेरि पनि यस्तै छापामारजस्ता आक्रोशित युवाहरु जुटाउनै व्यस्त छन् ।
पूर्वछापामारहरु अवकाश लिएका हुन् वा अयोग्य घोषित भएकाहरु हुन्, उनीहरुले के गर्दै होलान् ? हेर्न, खोज्न पदैन ? कोषका निर्देशक पौडेल भन्छन्– ‘यो एकदमै आवश्यक कुरा हो । यसबारेमा पनि हामी सोच्दै छौँ । खास गरेर ऐच्छिक अवकाशमा बसेकाहरुको अवस्था के छ, बुझ्ने योजना बन्दै छ । अयोग्य भनेर निस्किएकाहरुलाई पनि यसमा समेट्नु पर्ने हाम्रो विचार छ ।’ अर्थात्, समायोजन नभएर बाहिरिएका छापामारहरुको अवस्थाले सरकार होस् वा पार्टीलाई सताउन छाडेको भने छैन । तर, यो मुद्दामा गम्भीर भएर लागेको कोही देखिँदैन ।
लडाकुको नाममा झन्डै छ अरब रूपैयाँ खर्च गरेको शान्ति कोषले यसबारेमा केही न केही सोच्न आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन र छापामार तथा शिविर व्यवस्थापनपछि भएको ठूलो खर्च सशस्त्र संघर्षका बेलामा ध्वंस भएका प्रहरी कार्यालयहरुको पुनर्निर्माणमा हो । संघर्षका बेलामा छ सयका हाराहारीमा प्रहरी चौकी भत्केका थिए । तीमध्ये आधा शान्ति कोषको पैसाले बनेका छन् । यो काममा तीन अरब
रूपैयाँ खर्च भएको छ । छापामारदेखि प्रहरीसम्म, चुनावदेखि अन्य योजनाहरुमा यसरी अरबौँ रूपैयाँ खर्च हुँदा पनि शान्ति अझै परको विषय बनेको छ । राजनीतिक मुद्दाको व्यवस्थापन नहुँदा जनता निराश छन् ।
यो अरबौँ रूपैयाँ हामी आफ्नै ताकत र बर्कतले जुटाएको धन पनि होइन । निर्देशक पौडेलका अनुसार पनि कोषमा ६० प्रतिशत नेपाल सरकार र ४० प्रतिशत विभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले दिएको पैसा राख्ने गरिएको छ । यसरी सहयोग गर्नेहरुमा पहिला नौ देशहरु थिए । अहिले संख्या घटेर पाँचमा झरेको छ । सहयोग गर्नेमा युरोपियन युनियनले सबैभन्दा ठूलो धनराशि दिने गरेको छ । अर्थात्, हामीले गरेको ध्वंसको निर्माणका लागि विदेशीका सामुन्ने हात फैलाउनु परेको दुःखद अवस्था छ । हिजो आमनेसामने भएर लडेका प्रहरी र लडाकुका लागि झन्डै नौ अरब रूपैयाँ हामीले खर्च गरेका छौँ । हिजो आपसमा लड्यौँ, आज विदेशबाट पैसा ल्याएर काम गर्नु परेको विडम्बना छ हाम्रासामु ।
एउटा ध्वंसको यस्तो मूल्य चुकाउँदा पनि हामीहरु अझै राजनीतिक व्यवस्थापनमा जुट्न र मुलुकलाई निकास दिन सकेका
छैनौँ । असमझदारीहरु झाँगिएर गएका छन् । आन्दोलन र अराजकतामा रमाउने नेताहरु यहाँ छन् । आन्दोलनमा लागेर देशले के पायो ? युद्धले देशलाई के दियो ? सहिदका परिवारले सन्तोष गर्ने ठाउँ छ वा छैन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी सधैँ देश आन्दोलनमा जान तयार छ, युद्धमा होमिन तयार छ । देशले भोगेका युद्धको प्रभाव र असर खोज्ने बेलामा हामी फेरि युद्धमै जान लालायित छौँ । यसले देशलाई कसरी भलो हुन्छ ? हामी भत्काएर बनाउनका लागि विदेशीको पैसा खोज्न जाने देशका नागरिकहरुले भत्काउनुअघि धेरै कुरा सोच्न अति आवश्यक छ ।